Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဆရာတော်ဦးဝီရသူ ရခိုင်အလှူကြွရောက်မည်
မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မသဟာကျောင်းနာယ ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တာဘိဝံသ အရှင်ဝီရသူ (မစိုးရိမ်) သည် အကူ အညီ လိုအပ်နေသည့် ရခိုင်ပြည်သူများ အလှူခံဌာန ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ရခိုင်ပြည်သူကူညီရေး ဓမ္မသဘင်များကျင်းပခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ယခုဆိုလျှင် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၀၀ ကျော် ကျွန်းသေတ္တာ (၅၃) လုံး၊ သံသေတ္တာ(၅၆)လုံး အ၀တ်အထည်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ လိုက်ထရပ်ကား (၁၀) စင်းခန့် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အဆိုပါပစ္စည်းများနှင့် ငွေကျပ်သိန်းတစ်ရာကို တောင်စလင်းတိုက်သစ် ဗြဟ္မစိုရ်ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တတိက္ခဦးဆောင်သည့် တောင်တန်းသာ သနာပြု ဌာနမှတဆင့် ရခိုင်ပြည်သူများထံ ထောက်ပံ့ကူညီလှူနိုင်ရန် လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။
ကျန်ငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀) ကျော်မှ ငွေကျပ် (၆, ၅၉၉, ၂၀၀) မှာ တရားနာပရိသတ်များနှင့် တရားပွဲကုသိုလ်ရှင်များ လှူဒါန်းထားသော ဓမ္မ ပူဇာအလှူငွေများဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုငွေများကို ရခိုင်ပြည်သူများအတွက် ၀ါခင်းကုန်းဆရာတော်ဦးတိက္ခထံ ထပ်မံအပ်နှံလှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်ငွေ သိန်း (၅၀) ကျော်ကို ရခိုင်ပြည်သူများအား အရှင်ဝီရသူကိုယ်တိုင် သွားရောက်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။
ဆရာတော်အရှင်ဝီရသူသည် ဇူလိုင် (၆) မှ (၈) ရက်အထိ သုံးညတရားဟောပြီးလျှင် ရန်ကုန်သို့ဆင်းကာ ကမာရွတ်မြို့မှ (၉-၇-၂၀၁၂) ရက်နေ့ည တရားဟောကြားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါတရားပွဲကို တောင်ဥက္ကလာပ ၀ိမုတ္တိသင်္ကန်းတိုက်မှ ဦးတင်ယုနှင့် သင်္ဃန်းကျွန်းမှ ဦး မောင်မောင်တို့ ဦးဆောင်ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ရခိုင်ပြည်သူကူညီရေးတရားပွဲပင် ဖြစ်ကြောင်း ထိုတရားပွဲပြီးလျှင် ရခိုင်ပြည်သို့ ကြွရောက်ကာ ရခိုင်ပြည်သူများအား လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။
ရခိုင်ပြည်သူကူညီရေးအတွက် ပြန်လည်လှူဒါန်းခဲ့သော ဓမ္မပူဇာအလှူငွေများ …
စဉ် ရက်စွဲ တရားပွဲ ဓမ္မပူဇာအလှူငွေ
၁။ ၂၅-၆-၂၀၁၂ ထွန်းတုံးမြို့သစ် ၈၈၅၀၀၀ ကျပ်
၂။ ၂၇-၆-၂၀၁၂ ၂၅၀၀ဓမ္မာရုံ ၁၀၀၀၀၀၀ ကျပ်
၃။ ၂၈-၆-၂၀၁၂ နန်းရှေ့ ၅၆၅၀၀၀ ကျပ်
၄။ ၂၉-၆-၂၀၁၂ ကျုံးအနောက်ဘက် ၃၀၄၉၀၀ ကျပ်
၅။ ၃၀-၆-၂၀၁၂ သင်ပန်းကုန်းမြို့သစ် ၁၁၀၀၀၀ ကျပ်
၆။ ၁-၇-၂၀၁၂ ၂၂လမ်း၊ ဧသုခဓမ္မာရုံ ၃၇၀၀၀၀ ကျပ်
၇။ ၂-၇-၂၀၁၂ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ကျောက်မီးရွာ ၁၀၂၃၉၀၀ ကျပ်
၈။ ၅-၇-၂၀၁၂ မဟာရပ်ကွက်၊ အောင်မေတ္တာဓမ္မာရုံ ၁၆၃၈၉၀၀ ကျပ်
စုစုပေါင်းရငွေ ၆၅၉၉၂၀၀ ကျပ်
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 09:35
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဆရာတော်ဦးဝီရသူ ရခိုင်အလှူကြွရောက်မည် . All Rights Reserved